Qaniinyada Suarez iyo Cayaaraha Adduunka - BBC News Somali
Ururka Kubadda cagta adduunka ee FIFA, ayaa bilaabay baaritaan xagga dishibiliinka ah, oo ku saabsan ciyaaryahanka reer Uruguay Lewisi Suarez la sheegay inuu qaniinay laacib difaaca uga ciyaara Talyaaniga mar ay shalay talaadadii 2da xul ee qaran ay dhexmartay ciyaar ka mid ah tartanka koobka adduunka.
Hase ahaatee, Suarez wuxuu sheegay laacibka difaaca Talyaanigu uu isaga hardiyey. Qodobkan, ayaa boggaga dambe ee wargeysada ka buuxay, siiba kuwa England, laakinse Uruguay waxaa diiradu saaran tahay Diego Godin oo guulkii guusha u dhaliyey Uruguay.
Dhinaca kale, waxaa xalay la soo gababeeyay cayaarihii Group-yada C iyo D.
Group-ka C, waxaa u gudbay wareegga xita kooxaha Colombia oo koowaad ku soo baxday oo sagaal yeelatay kadib markii Japan ay 4-1 uga badisay cayaartii xalay dhexmartay iyo kooxda Greece, oo iyaduna Ivory Coast 2-1 uga badisay kadib daqiiqadihii ugu dambeeyay waqtiga lagu diray oo rigoore ay heshay cayaarta oo barbarro ay ku soo bixi lahayd Ivory Coast.
Image caption Cayaaryahanka Ivory Coast, Wilfried Bony oo goolka barbardhaca u dhaliyay Ivory Coast.
Ivory Coast iyo Japan way hareen.
Dhinaca Group D waxaa wareegga 16-ka koox u gubay Costa Rica iyo Uruguay, iyadoo ay hareen kooxaha Talyaaniga iyo Ingiriiska.
Ilaa hadda kooxaha soo gudbay waxay isu aadayaan:
Brazil oo la cayaaraysa Chile, Colombia iyo Uruguay way kulmi doonaan.
Netherlands waxay iska hor imaanayaa Mexico, halka Costa Rica iyo Greece ay isku soo aadayaan.
Maanta Group-yada E and F ayaa la soo gabagabaynayaa, Ecuador iyo France way kulmayan, Honduras iyo Switzerland ayaa iska hor imaanayaa, Bosnia Hercegovina iyo Iran ayaa wada cayaaraya iyo Nigeria oo Argentina ay iska hor imaanayaan.